That's so good, right?: March 2012
ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့ လိင်မှုကိစ္စ (Safe Sex) မှာ အဓိက လိုအပ်ချက်နှစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများ တစ်ဦးမှတစ်ဦး မကူးစက်အောင် ကာကွယ်ရေးနဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ရသွားခြင်းကို ကာကွယ်ရေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ သန္ဓေတားဆေး မျိုးစုံက ကိုယ်ဝန်မရရေးပဲ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး AIDS အပါအ၀င် လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများကို ကာကွယ်မပေးနိုင်ပါ ဘူး။ ဒီအချက်နှစ်ချက်စလုံးကို အပြည့်အ၀ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာက ကွန်ဒုံး(Condom)ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးသုံးကွန်ဒုံးထက် အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံးက နှစ်ချက်စလုံးအတွက်ပိုစိတ်ချရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကွန်ဒုံးဆိုတာ သုံးတယ်ဆိုရုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။ အစအလယ် အဆုံးစနစ်တကျဖြစ်နေဖို့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှ အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်မှုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာ လေ့လာမှု များအရ လိင်ဆက်ဆံရာမှာ ကွန်ဒုံးသုံးသူ အမျိုးသား ၄ဦးမှာ တစ်ဦးဟာ စနစ်တကျ သုံးစွဲမှုမရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မဖြစ် သင့်တာ မဖြစ်အောင် သတိပြုဆင်ခြင်စရာ အန္တရာယ်အရှိဆုံးနဲ့ အမျိုးသားများ ကျူးလွန်တတ်တဲ့ ကွန်ဒုံးအမှား(၉)ချက်ကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
အမှား (၁) ပျက်စီးချို့ယွင်းမှုကို မစစ်ခြင်း
သုံးခါနီးမှာ မိမိသုံးစွဲမယ့်ကွန်ဒုံးဟာ မြင်နိုင်တဲ့ပေါက်ပြဲချို့ယွင်းမှုများ ရှိနေမလားလို့ စစ်ဆေးမှု၈၀%လောက်သော လူများမှာ မရှိကြတာ ဟာ အခြေခံအကျဆုံး၊ အကြီးဆုံးပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပေါ်ယံအိတ်အခွံ့ရဲ့ပေါက်ပြဲမှုမရှိတဲ့ အနေအထားကို အရင်ဆုံး စစ် ဆေးသင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ အိတ်ခွံပေါက်ပြဲမှုရှိနေရင် အတွင်းမှာပါရှိနေနိုင်လို့ အဲဒီကွန်ဒုံးကို မသုံးသင့်ပါဘူး။ အတွင်းမပျက်စီး လောက်တဲ့အပေါက်သေးသေးလေးရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်း မသုံးပါနဲ့။ ပြင်ပလေ၀င်ထားရင် အတွင်းမှာပါတဲ့ ချောဆီခြောက်ခမ်းမှုရှိကာ သုံးလိုက်တာနဲ့ပေါက်ပြဲသွားနိုင်လို့ပါ။ ပါးစပ်နဲ့ကိုက်ဖောက်တာ၊ ဓား၊ကက်ကြေး၊အချွန်စတာတွေနဲ့ ထိုးဖောက်တာ လုံးဝမလုပ်သင့်ပါ။ အိတ်မှာပါတဲ့ အရာအတိုင်းသာဖောက်သင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လက်စွပ်ဝတ်ထားတဲ့ လက်နဲ့ဖောက်မယ်ဆိုရင် သတိထားပါ။
အမှား (၂) သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကို မစစ်ဆေးခြင်း
ကွန်ဒုံးတစ်ခုရဲ့အသက်ဟာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် (Expiry Date) မလွန်သေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်လွန်နေပြီဆိုရင် ဘယ်လောက်အမျိုးအစားကောင်းတဲ့ ကွန်ဒုံပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးစွဲရန် မသင့်တော်တော့ပါဘူး။ အကယ်၍သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် ဖတ်မရအောင် ပျက်နေတာ (သို့) မပါဘဲ ထုတ်လုပ်တဲ့ရက်စွဲ (MFD) ပဲပါတာဆိုရင်လည်း ၅နှစ်အတွင်းသာ သုံးသင့်ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့အချက် တစ်ချက်အနေနဲ့ပြောရရင် ကွန်ဒုံးကိုသိုလှောင်သယ်ဆောင်တဲ့ နေရာဟာအင်္ကျီအိတ်ကပ်၊ ပိုက်ဆံအိတ်စတဲ့ အပူချိန်မြင့်တဲ့နေရာတွေ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အခန်းအပူချိန်ထက် ပိုမြင့်တဲ့နေရာများ၊ နေရောင်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုရှိတဲ့ နေရာများမှာ သိုမှီးမထားသင့်သလို အဲသလိုထားတဲ့ ဆိုင်တွေကလည်း မ၀ယ်ယူမိအောင် သတိထားပါ။
အမှား(၃) နောက်ကျပြီးမှ သုံးခြင်း
လူငယ်တွေရဲ့ ၄၃%ဟာ ဦးဆုံးအင်္ဂါနှစ်ခုပွတ်သပ်ထိတွေ့ပြီးမှ ကွန်ဒုံးစစွပ်တတ်ကြကြောင်း အနောက်နိုင်ငံများမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့စစ်တမ်း တွေအရ သိရပါတယ်။ ဒါဟာ လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ အသည်းရောင်အသားဝါရောဂါ၊ လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့၊ HIV စတဲ့ပိုးများ ကူးစက်ရန် အရမ်းနီးစပ်သလို အမျိုးသားရဲ့ သုတ်ရည်က စိမ့်ထွက်နေပြီဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ရသွားနိုင်စွမ်းလည်း ရှိတာမို့ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ လုံးဝထိတွေ့ဆက်ဆံမှု မလုပ်ရသေးခင်ကတည်းက ကြိုတင်ကာကွယ်ထားပါ။
ကွန်ဒုံးစွပ်ချိန် ထိပ်ပိုင်းနေရာလေးကို လေမခိုအောင် လက်နဲ့အသာဖိထားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း အညွှန်းစာရွက်မှာပါပေမဲ့ သုံးစွဲသူ ၅ဦင်္းမှာ ၂ဦးက မလိုက်နာတတ်ကြကြောင်း စစ်တမ်းများအရ သိရပါတယ်။ ဒီအထဲ သင်မပါဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီလို နေရာလွတ် ချန်မထားဘူးဆိုရင် လွယ်ကူစွာပြဲသွားတတ်ပါတယ်။
သေချာမသုံးတတ်လို့သော်လည်းကောင်း၊ ပြီးပြီးရော လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်လည်းကောင်း ကွန်ဒုံးကို ပြောင်းပြန်သုံးစွဲမိတတ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ကျွတ်ထွတ်သွားနိုင်တဲ့ပြဿနာရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် လိပ်ထားတဲ့ဘက်ကို အပေါ်က မြင်ရသလား သေချာကြည့်ပြီးမှ အသုံးပြု သင့်ပါတယ်။
အမှား(၆) ချောဆီများ ဖြည့်စွက်အသုံးပြုခြင်း
ကွန်ဒုံးထဲမှာပါတဲ့ ချောဆီကြောင့်အဆိုပါကွန်ဒုံး မပေါက်ပြဲစေနိုင်ပေမယ့် မိမိသဘောနဲ့ မိမိဘာမှန်းမသိတဲ့ ဂျယ်လ်တွေ၊ မျက်နှာလိမ်း ကရင်မ်၊ ကိုယ်လိမ်းကရင်မ်၊ လိုးရှင်း၊ ခေါင်းလိမ်းဆီ၊ တံတွေး စတာတွေကို ဖြည့်စွက်အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ကွန်ဒုံးပေါက်ပြဲခြင်း ကြုံရနိုင် ပါတယ်။ ရေအခြေခံ (သို့) ဆီလီကွန်ကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ချောဆီ (water-based or silicone lubricants) တွေဖြစ်တဲ့ ဂလစ်ဆရင်း ခေါ်အလှဆီ၊ K-Y Jelly စတာတွေကိုပဲ ရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်ပြီး ဘာမှထပ်မထည့်ခြင်းကတော့ အန္တရာယ်အကင်းဆုံးနည်းလမ်းလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အမှား (၇) မိမိနှင့်မသင့်တော်သောအရွယ်အစားကို ရွေးချယ်မိခြင်း
ကွန်ဒုံးကျွတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့ ၁၃%လောက်ဟာ မိမိနဲ့မတော်တဲ့အရွယ်အစား(သို့) မိမိနဲ့မသင့်တော်တဲ့ ပုံဖော်ထားသော ကွန်ဒုံး ကို သုံးလိုက်မိလို့ဖြစ်ကြောင်းစစ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ ဒီအချက်ကို အထူးသဖြင့် အမျိုးသားအင်္ဂါပုံမှန်ထက်သေးသူ၊ ကြီးသူများ သတိထားသင့်ပါတယ်။ တကယ်သုံးဖို့စိတ်ကူးရှိရင် အားလပ်ချိန်မှာ မတူညီတဲ့ ကွန်ဒုံးအမျိုးအစား၊ အရွယ်အစားမျိုးစုံကို စမ်းသပ်ကြည့် ရင် ပိုအန္တရာယ်ကင်းကြောင်း ပညာရှင်များက အကြံပြုထားပါတယ်။
အမှား (၈) နှစ်ထပ် (သို့) နှစ်ခုတစ်ပြိုင်နက်သုံးခြင်း
အချို့စုံတွဲတွေက အကာအကွယ်ကို နှစ်ဆတိုးစေချင်လို့ အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံး နှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်နက်စွပ်ပြီးသုံးကြပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အမျိုးသားကလည်း အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံး၊ အမျိုးသမီးကလည်း အမျိုးသမီးကွန်ဒုံး တစ်ပြိုင်တည်စွပ်ပြီး ဆက်ဆံကြပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အပျော်အပါးကိစ္စတွေမှာ မိန်းကလေးကို ရောဂါစိတ်မချလို့ အမျိုးသားအချို့ နှစ်ထပ်သုံးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ အင်မတန် မှားယွင်းတဲ့ အပြုအမူဖြစ်ပါတယ်။ အမြှေးပါးနှစ်ထပ်ပွတ်အားကြောင့် condom failure ရသွားတတ်ပါတယ်။
အမှား (၉) တိရစ္ထာန်သားရေနဲ့ လုပ်ထားသော ကွန်ဒုံးများသုံးခြင်း
အချို့သော ကွန်ဒုံးအများစုကို လုပ်ထားတဲ့ ရာဘာစေး(Latex) နဲ့ ဓာတ်မတည့်ဘဲ အလာ့ဂျစ်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်သော် လည်းကောင်း၊ ရာဘာကွန်ဒုံးတွေက အထိအတွေ့ကျေနပ်မှုအပြည့်အ၀ မပေးနိုင်လို့သော်လည်းကောင်း သိုးသားရေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ကွန်ဒုံး(Sheepskin/Lambskin Condoms) တွေကို ရှာကြံသုံးစွဲတတ်ကြပါတယ်။ သိုးသားရေကွန်ဒုံးတွေဟာ အမျိုးသားသုတ်ပိုးကိုသာ ဖြတ်သန်းမသွားအောင် တားဆီးနိုင်ပေမယ့် HIV ဗိုင်းရပ်စ်ကိုတော့ မတားဆီးနိုင်ပါဘူး။ အကြောင်းရင်းကတော့ သူ့မှာပါတဲ့ အပေါက် လေးတွေကသေးပေမယ့် HIV ပိုးကဖြတ်သန်းဝင်နိုင်လောက်သေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သန္ဓေတားဖို့တစ်ခုတည်းဆိုရင်တော့ သိုး သားရေကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီး သန္ဓေကော၊ရောဂါတွေပါ ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ မသုံးသင့်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ Latex နဲ့ဓာတ်မတည့်ရင် ပေါ်လီယူရီသိန်း(Polyurethane) ၊ ပေါ်လီအိုင်စိုပရင်း(Polyisoprene) အသားတွေနဲ့လုပ်ထားတာတွေ ရှာဝယ်သုံးလို့ရပါတယ်။
Rebecca Denison ဟာ WORLD (Women Organized to Life threatening Disease www.womenhiv.org) ကို စတင်တည်ထောင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သူဖြစ်သလို WORLD ရဲ့သတင်းစာစောင်များ ထုတ်ဝေရေးမှာ အယ်ဒီတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ HIV နဲ့ အတူတကွ နေထိုင်လာသည်မှာ နှစ် ၂ဝ တိုင်ခဲ့ပြီး ၇ နှစ်အရွယ် အမြွှာသမီးကလေးတွေရဲ့ စံပြမိခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ဘဝတူတွေအတွက် အဖိုးနည်း ကုန်ကျသက်သာစွာနဲ့ မိမိကိုယ်ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နည်း အချက် ၃ဝ ကိုရေးသားထားပါတယ်။ တချို့အချက်တွေက HIV မရှိသူတွေအတွက်ပါ အသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
(၁) အသက်ရှူပါ (Breathe)
သင့်စိတ်ထဲမှာ မွန်းကျပ်လာတဲ့အခါ (သို့) စိုးရိမ်ပူပန်မူတွေများနေတဲ့အခါမှာ လုပ်လက်စ အလုပ်တွေ ရပ်လိုက်ပြီး အသက်ပြင်းပြင်းရှည်ရှည် ၃ ကြိမ်ခန့် ရှူသွင်းပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းထုတ်ပါ။ ဒါဟာ ဘယ်လောက်တောင် ကိုယ့်ကို ငြိမ်သက်သွားစေတယ်ဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ။
(၂) သေမိန့်ကျထားသူလို့ မခံယူပါနဲ့ (Refuse to beavictim)
မတတ်နိူင်သည့်အရာများကို မျက်ကွယ်ပြုထားပြီး တတ်နိူင်သည့်အရာများကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ နှစ်မြုပ်၍လုပ်ဆောင်ပါ။ AIDS နဲ့သေမည်လို့ မတွေးထားပါနဲ့။ HIV နဲ့အတူနေထိုင်မည်လို့သာ တွေးထားပါ။ “I have HIV” လို့ပြောပါ။ “I am HIV” မဟုတ်။ အကူညီပေးနိူင်သော နေရာများကို ဆက်သွယ်ပါ။ စိတ်ပျက်အားငယ်စရာ မလိုပါ။
(၃) အမေ့စကားကို နားထောင်ပါ (Listen to your mother)
ပုံမှန်အိပ်စက်တာအပြင် လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို များများအိပ်ပေးပါ။ အိပ်မပျော်ရင် သီချင်း ဒါမှမဟုတ် တရားခွေ နားထောင်ပါ။ အဟာရ ဖြစ်စေမယ့်အစာအကုန်စားပါ။ Multivitamin နေ့ စဉ်သောက်ပြီး လေကောင်းလေသန့်ရှူပါ။
(၄) မိမိနှင့်ဘဝတူ အခြားအမျိုးသမီးများနှင့် စကားပြောရန် အဖိုးအခပေးစရာမလိုသော ဖုန်းလိုင်းများကို အသုံးပြုပါ။ (Callatoll free hotline)
နိူင်ငံအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လိုင်းခွဲနံပါတ်များကို ဖော်ပြထားသည်။
(၅) ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပြုပါ (Exercise)
ဒါဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကောင်းမွန်ရုံတင်မဟုတ်ဘူး စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုပါ ပြေပျောက်စေတယ်။ ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမလဲလို့ ဇဝေဇဝါ ဖြစ်မနေပါနဲ့။ မိမိနှစ်သက်ရာက အသင့်လျှော်ဆုံးပါ။ တတ်နိူင်ရင် ဝါသနာတူသူငယ်ချင်းများနှင့် အတူလုပ်ပါ။ လမ်းလျှောက်တာကလည်း မရိုးနိူင်တဲ့နည်းပါပဲ။ ထိုက်ချိ၊ ယောဂ သင်တန်းတွေလည်း သွားတက်လို့ရသေးတယ်။
(၆) သင့်ကိုယ်သင် ချုပ်တည်းမထားပါနှင့် အကူညီတောင်းခံပါ (Express yourself: ask for support)
သူငယ်ချင်းများနဲ့ စကားပြောပါ။ အမေနဲ့ပွေ့ဖက်ပြီးနေပါဦးလား။ ကလေးပုခက်လွှဲပြီး သီချင်းဆိုပါ။ အစ်မနဲ့အတူ ငိုချလို့လည်းရတယ်။ အချစ်ဆုံးသူနဲ့ ခံစားချက်တွေ ရင်ဖွင့်လိုက်စမ်းပါ။ ပြီးတော့ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးသူ၊ ကုသပေးသူနဲ့ သင်အုပ်ဆရာတော်တွေဆီကလည်း အကူအညီတွေ ရနိူင်သေးတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
(၇) ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခံဓာတ်လေးကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး လက်ခံလိုက်ပါ (Embrace your own spirituality)
ဒါလေးက လူအမျိုးမျိုးမှာ ကွဲပြားတတ်တယ်လေ။ တချို့ကသဘာဝတရားကြီးကို မြတ်နိူးတယ်။ တချို့ကတရားထိုင်။ ဒါမှမဟုတ် သီချင်းဆို။ တချို့ကလည်း ဘုရားကျောင်းတွေမှာပျော်တယ်။ အခုဆို ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေက HIV ရှိသူနဲ့ မိသားစုတွေကို ထောက်ပံ့ဖို့လုပ်နေကြပါပြီ။ ဘုရားသခင်အပေါ် စိတ်တိုမိတယ်ဆိုရင် ဝန်ခံလိုက်ပါ၊ ဒါဟာ အမှားပဲလို့။ HIV ဟာဗိုင်းရပ်စ်ပါ။ အပြစ်ပေးမှုမဟုတ်သေးပါဘူး။ သင်နဲ့သင့်ရဲ့ရောဂါကို ဝေဖန်နှိမ့်ချသူတွေနဲ့ အချိန်ပေး အဖက်လုပ်နေစရာမလိုပါဘူး။
(၈) ဓာတ်ခွဲခန်းက အဖြေတွေကို ကော်ပီ ကူးထားပါ (Ask for copies of your labs)
ဘာတွေရေးထားပြီး ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ မေးမြန်းသင်ယူပါ။
(၉) အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့တွေးပါ၊ ဆောင်ရွက်ပါ (Thick and act positively)
ရိုးသားတဲ့လူ၊ ယုံကြည်ရတဲ့သူ၊ အကူညီပေးနိူင်တဲ့သူတွေကို ရှာဖွေပေါင်းသင်းပါ။ ကိုယ့်ကို လက်မခံတဲ့လူ (သို့) ကိုယ့်ကို စိတ်ဓာတ်ညစ်ညူးစေတဲ့လူတွေနဲ့ ယာယီ(သို့) အမြဲတမ်း အဝေးမှာနေဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခွင့်ပြုလိုက်ပါ။ သတင်းစာထဲက နာရေးကြော်ငြာမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်လိုဂုဏ်ပြုခံချင်သလဲ ရေးချပါ။ ပြီးတော့ အဲဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင် တစ်လှမ်းချင်း ကြိုးစားမယ်။
(၁ဝ) ငိုချင်တဲ့အခါ ငိုချလိုက်ပါ (Cry when you need to)
မျက်ရည်တွေကို ကျပါစေ၊ မတားပါနဲ့။ မျက်ရည်နဲ့အတူ ကောင်းကျိုးမရှိတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေပါ ပါသွားလိမ့်မယ်။ ဒါဆို အသစ်ရောက်လာမယ့် ခံစားမှုလှလှလေးတွေအတွက် နေရာရှိသွားပြီပေါ့။ ကိုယ်ငိုတဲ့ အခါ ပွေ့ဖက်အားပေးသူရှိခဲ့ရင် လက်ခံလိုက်ပါ။ မျက်ရည်ကနေ HIV မကူးနိူင်ပါဘူး။
(၁၁) ဒေါသတွေကို စနစ်တကျစွန့်ပစ်ပါ (Find safe outlets for your anger)
စိတ်ထဲမှာ မျိုသိပ်မထားနဲ့။ ယုံကြည်တဲ့သူငယ်ချင်းကို ရင်ဖွင့်ပစ်လိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ဘာမှမလုပ်ဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အနားပေးလိုက်ပါ။ စာနဲ့ရေးချလို့လည်း ရတယ်။ ရေးပြီးသိမ်းချင်သိမ်း၊ ပို့ချင်ပို့လိုက်ပါ။
(၁၂) ကိုယ့်ကိုယ်လည်းခွင့်လွှတ်၊ သူများကိုလည်းခွင့်လွှတ် (Forgive yourself and others)
တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ခွန်အားတွေကို အလိုမကျမှု ဒေါသတွေ၊ ခါးသီးကောက်ကျစ်မှုတွေ၊ မနာလိုဝန်တိုမှုတွေနဲ့ မကုန်ခန်းပါစေနဲ့။ အတိတ်က အမှားတချို့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသာလေး ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ။ HIV အတွက်လည်း ဘာအပြစ်မှ တင်မနေတော့နဲ့။ အရွယ်ရောက်တဲ့လူ အများစုက ဒီလိုပဲ HIV နဲ့ပွတ်ရှောင်သွားတတ်ကြတယ်။ ငါတို့က ကူးစက်ခံရတယ်။ ကျန်တဲ့လူတွေက ကံကောင်းတယ်။
(၁၃) မိမိဆီမှာပဲသိမ်းထားပါ (Accept responsibility)
အလေးအနက်ထားရမှာပါ။ HIV ဟာကိုယ့်ဆီမှာပဲ ရပ်တန့်နေရမှာပါ။ ကွန်ဒုံးသုံးပါ။ ဆေးထိုးအပ် မျှမသုံးပါနဲ့။
(၁၄) ကိုယ်လိုပဲ HIV ပိုးရှိသူတွေနဲ့ စကားပြောပါ (Talk to other HIV+ People)
ကိုယ်ရှေ့ဆက်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းရမယ်ဆိုတာ သိနေတဲ့လူတွေနဲ့ စကားပြောရတာ စိတ်သက်သာမှုရစေပါတယ်။ သူတို့ဆီကနေ ဘယ်လိုအတွေ့အကြုံတွေရနိူင်သလဲ၊ သူတို့ ဘယ်လိုဖွင့်ပြောမှုတွေ လုပ်ခဲ့ကြတယ်၊ ကုသမှုအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပုံတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် သူများကို မကူးစက်အောင် လိင်ဆက်ဆံမှုတွေ ဒါတွေကို သိနိူင်ပါတယ်။ ဘဝတူတွေ ဘယ်မှာရှာတွေ့နိူင်သလဲဆို AIDS အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လူမှုထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တွေ၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ အပန်းဖြေ အနားယူတဲ့စုရပ်တွေ ညီလာခံများနဲ့ ဖုန်းလိုင်းတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၅) သင်ကိုယ်တိုင် HIV အကြောင်းသင်ယူလေ့လာပါ (Educate yourself about HIV)
စာစောင်တွေကို ငွေသွင်းရယူပါ။ မတတ်နိူင်တဲ့လူတွေကို အခမဲ့ပေးဝေတာရှိပါတယ်။ ပညာပေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကို တက်ရောက်ပါ။ ကုသမှုဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေအတွက် ဆွေးနွေးပါ။ အင်တာနက်ကို အသုံးပြုပါ။ စာကြည့်တိုက်ကိုသွားပါ။ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်ဟောင်းတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ကုသမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်တွေက အမြဲပြောင်းလဲနေတတ်တယ်။
(၁၆) ကုသမှုပေါင်းစုံကို ဆန်းစစ်ရှာဖွေပါ (Explore complementary therapies)
ဗီတာမင်တွေ၊ တိုင်းရင်းဆေးတွေနဲ့ အပ်စိုက်ကုသမှုတွေဟာ များသောအားဖြင့် ပိုက်ဆံပေးစရာ မလိုပါဘူး။ လူအများစုက ဒါတွေကို ရှာဖွေပြီး ရောဂါလက္ခဏာတွေ သက်သာအောင်ရယ်၊ ဆေးရဲ့ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေကို ကုသဖို့ရယ် အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့တော့ အရင်တိုင်ပင်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တချို့ သစ်မြစ်သစ်ဥတွေ၊ အပင်တွေက HIV ကုသဆေးတွေနဲ့ ဓာတ်မတည့်ပါဘူး။
(၁၇) စိတ်တည်ငြိမ်ပျော်ရွင်ဖို့ အနုပညာနဲ့ကုသပါ (Explore art for fun or therapy)
ရွံ့စေးနဲ့အရုပ်ကလေးတွေ ထုလုပ်ပါ။ ကလေးတွေနဲ့အတူ ဆေးရောင်ခြယ်ပါ။ မတတ်သေးတဲ့ အရာတစ်ခုကို လိုလိုချင်ချင် သင်ကြည့်ပါဦး။
(၁၈) ရွှင်မြူးမြူးလေးနေပါဦးလား (Have fun!)
တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်တော့ အားရပါးရ ရယ်သင့်တယ်။
(၁၉) မူးယစ်ဆေးနဲ့ အရက်ကိုလျော့ပါ (Reduce use of drugs and alcohol)
သင်ကိုယ်တိုင် ဒါမှမဟုတ် သင့်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဟာ ဒါတွေကို သုံးစွဲနေပြီး ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် AA (Alcohol Anonymous) နဲ့ NA (Nacrotics Anonymous) တို့က ကူညီပါလိမ့်မယ်။ မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲနေပြီး မဖြတ်နိူင် (သို့) မဖြတ်ချင်ဖြစ်နေရင်တော့ အဖွဲ့စည်းတွေမှာ တစ်ခါသုံးအပ်များ တောင်းခံပါ။
(၂ဝ) မိမိကိုယ်ကို ချစ်ပါ (Pampker yourself)
အမွေးနံ့သာနဲ့ရေပူရေနွေးလေးချိုးပြီး သီချင်းငြိမ့်ငြိမ့်လေးနားထောင်ပါ။ ခြေသည်းလက်သည်းတွေလှီးဖြတ်။ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်မည့် ဝတ်စုံလေးဝတ်၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ပြောင်း ဖူးပေါက်ပေါက်ကို အတူစားပြီး ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားလောက်ကြည့်ပါ။
(၂၁) နေ့စဉ်မှတ်တမ်းရေးပါ (Journal writing)
စိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့ သင်ယူမှုတွေကို ရေးချပါ။ သဒ္ဒါနဲ့ စာလုံးပေါင်းအတွက် စိတ်မပူပါနဲ့။ ဒါ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းအတွက်လေ…။
(၂၂) သဘာဝတရားကို ချစ်မြတ်နိူးပါ (Appreciate nature)
ခြေလှမ်းတွေ ရပ်လိုက်ပြီး လေထဲကနှင်းဆီရနံ့ကို ရှာဖွေပါဦး။ နေဝင်ရှူခင်းကိုလည်း မလွတ်စေနဲ့။
(၂၃) ဘုရားဝတ်ပြု၊ တရားထိုင် (သို့) စိတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့် (Pray, meditate or visualize)
တရားတိပ်ခွေငှား (သို့) ဝယ်ပြီး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမှာ အချိန်ဖြူန်းပါ။ တက်ကြွစွာ လတ်ဆတ်တဲ့ ပုံရိပ်တွေ သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ စိတ်ကိုဖြည့်တင်းပေးပါ။
(၂၄) အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ပျော်ရွင်စွာဆော့ကစားပါ (Enjoy the company ofapet)
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေဟာ အကောင်းဆုံး အဖော်မွန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေ လဲလှယ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ နှာခေါင်းစွပ်နဲ့ လက်အိတ်တို့ လိုကောင်းလိုပါမယ်။ ဒါမှမဟုတ် တခြားလူတွေကို အကူညီတောင်းပါ။
(၂၅) အနှိပ်ခံခြင်း ( Massage)
လိင်စိတ်နှိုးကြွစေခြင်းမဟုတ်တဲ့ ထိတွေ့မှုများဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင် အများကြီး အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းနဲ့ အပြန်အလှန်နှိပ်ပေးလို့လည်း ရပါတယ်။ တချို့ အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ အခမဲ့နှိပ်ပေးပါတယ်။
(၂၆) AIDS အဖွဲ့အစည်းတွေအကြောင်း လေ့လာပါ (Check out an AIDS organization)
လိုအပ်တဲ့ အကူညီကိုတောင်းခံပါ။ သူတို့ဘာဝန်ဆောင်မှုတွေ အခမဲ့ပေးနေသလဲဆိုတာ ရှာဖွေပါ။ ဥပမာ အပန်းဖြေနားခိုရာ၊ ပညာပေးခြင်း၊ ကလေးများပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပညာပေးခြင်း (သို့) ပန်းချီဆွဲသင်တန်းများ။
(၂၇) တစ်ရက်ချင်းအသက်ရှင်ပါ (Take life one day atatime)
ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စရပ်တွေကို မိမိစွမ်းဆောင်နိူင်သလောက် ပိုင်းခြားပြီး လုပ်ဆောင်ပါ။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင် မိမိဘဝဟာ တစ်ကြိမ်မှာ တစ်နာရီပဲဆိုပြီး သဘောထားပါ။ တစ်ပတ်တာကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင် ကျော်ဖြတ် သွားမယ်ဆိုတာ သိစရာမလိုဘူးလို့ မိမိကိုယ်ကို ပြန်ပြောပါ။ ဆရာဝန်နဲ့ ပထမဆုံးတွေ့ဆုံဖို့ရာ အားအင်မွေးထားဖို့ပဲလိုတယ်။
(၂၈) အန္တရယ်ဖြစ်စေမည့် အစာများကို ရှောင်ပါ (Eat safely)
အသား၊ ငါးနဲ့ ဥတွေကို အစိမ်းစားခြင်း (သို့) မကျက်တကျက်စားခြင်းတို့မှ ရှောင်ပါ။ ရေခဲသေတ္တာထဲ သိမ်းဆည်းရမယ့် အစားအသောက်တွေကို အပြင်မှာမထားပါနဲ့။ ရက်လွန်မကောင်းတော့တဲ့ အစားအစာတွေ မစားမိပါစေနဲ့။ သံသယရှိရင် လွှင့်ပစ်ပါ။
(၂၉) တက်ကြွစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားပါ (Get involved)
ကလေးတွေကို AIDS ပညာပေး ဟောပြောသူအဖွဲ့တွေကို ဆက်သွယ်ပါ။ AIDS အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း (Volunteer) အဖြစ် လုပ်အားပေးပါ။ AIDS တိုက်ဖျက်သူအဖြစ် ခံယူပါ။ လူတိုင်းဟာ HIV/AIDS တိုက်ဖျက်ရေးမှာ တစ်နိူင်တစ်ပိုင် ပါဝင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
(၃ဝ) နောက်ဆုံးမမေ့ဖို့က (Remember that….)
Ref: The Positive Side (CATIE)
Taking care of yourself by Rebecca Denison
၂ဝဝ၇၊ မတ်လ၊ ဖူးငုံဆယ်ကျော်သက်မဂ္ဂဇင်း
Posted by Alex Aung at 9:46 PM No comments:
'သူရိန် မင်းပြောနေတာအမှန်တွေဆိုရင် ဘယ်ကနေ ဘယ် အထိကအလိမ်အညာလဲ ပြီးတော့ ဘယ်ကနေ ဘယ်အထိက အမှန်လည်း ငါ့ကိုပြောပါ'
'ဟုတ်ပါတယ်.....ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေက အမှန်တွေ ချည်းပါပဲ'
'မင်းလူယုတ်မာပဲ၊ အသုံးချရုံသက်သက်နဲ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကား ကိုသုံးပြီး ငါ့ကို.....'
အတော့်ကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့လောကကြီးပါ၊ အချစ်ဆိုတဲ့ စကားလှိုင်လှိုင်သုံးပြီး လူတစ်ယောက်ကိုချဉ်းကပ်တယ်။ ကိုယ့် အတွက် အရာရာအဆင်ပြေပြီဆိုတော့ အမှန်တွေက ပါလာ တော့တာပဲ။ ချိုသာတဲ့စကားမှာနစ်မျောမိတဲ့ကျွန်တော်ကသာ အရူးသက်သက်ဖြစ်ခဲ့ရတာ။
'တောက်!' ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်လည်းဒေါသဖြစ်မိတယ်။ ယောက်ျားခြင်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့ အပြောစကားအပေါ် အယုံ လွယ်ခဲ့မိတာကို။ သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးဖြစ်တဲ့ ကျော်ခေါင် ပြောတာကိုတောင် ဂရုစိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ 'မင်းက အဲဒီ ကောင်ကို အမ်းနေတာလားကွ၊ ဒီကောင်က ချူဆီဆိုတာ မင်းတကယ်မသိတာလား...ဟင်?'
'အစ်ကို့ကိုသတိရနေတာ၊ အစ်ကိုနဲ့တွေ့ရတာ ညီ့အတွက် အရမ်းကံကောင်းတာပဲဗျာ၊ အစ်ကို....အစ်ကို့ကို ချစ်တယ် ဗျာ.....နော်'
သွားစမ်းကွာ.....အဲဒီလိုအပျိုးလေးတွေနဲ့ ငါမျောခဲ့ရတာ မင်း flow လေးတွေကြားမှာ။ ဘာတဲ့....အချစ်ဆိုတာ အစ်ကိုနဲ့ မှသိလာတာဆို လား....ဟား....ဟား။
ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်စွာ အော်ဟစ် ပစ် လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အနီးမှာရှိတဲ့ ပန်းအိုးနဲ့ သူ့ဆီ ပစ်ပေါက် လိုက်တာ ခေါင်း နားက ကပ်လွဲပြီး နံရံကိုမှန်ကာ အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာဖြစ်သွားရော။
'ဟေး...ငါ့ကောင် ရူးနေလား ကိုယ့်ကိုမှန်ရင်အကွဲပဲနော်၊ စိတ် ကိုထိန်းမှပေါ့ကွ' တဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့ ကျွန်တော့် နား အသာချဉ်းကပ်ပြီး ဖျောင်းဖြပါလေ့။
အမြဲတမ်းပဲကျွန်တော်တို့ ဒီလိုဖိုက်တင်ဖြစ်နေခဲ့ကြတာ ညတိုင်း လိုလိုကိုဖြစ်နေပြီ အခုတလော။ သူဘယ်တော့မှ ကျွန်တော့် ခံစားချက်ကို နားမလည်ဘူး။ သူအပြင်ထွက်ထွက်နေတာ မုန်း တယ်ဆိုတာကိုရော။ အထူးသဖြင့် ညညဆိုရင် နာရီအတော် များများ အပြင်ကိုထွက်နေတာ ကလပ်တွေ ဘားတွေဆီ။ သူအမြဲတစေ အခိုင်အမာပြောနေတာကတော့ သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ အပျော်သွားလာ အပန်းဖြေရုံသက်သက်ပါတဲ့။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုသိနိုင်မှာလဲ အမှန်လားဆိုတာကို။ ဘာကြောင့်ညညဆို အပြင်ထွက်ဖို့ဒီလောက် အားသန်နေရ တာလည်း? တစ်ယောက်တည်းအိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် စောင့်နေရတာကိုမတွေးဘူးလား? အမြဲတမ်း သူအိမ်ပြန်အလာ ကိုမျှော်နေ ရတာ။
သူကျွန်တော့်ဆီလှမ်းလာပြီး သူ့လက်မောင်းကြီးတွေနဲ့ ဖက် တွယ်နှစ်သိမ့်ဖို့ကြိုးစားတာမှာ သူ့လက်တွေကို ပုတ်ထုတ်ပစ် လိုက်တာပေါ့။
ဘယ်လောက်ပဲဒေါဖောင်းဖောင်း နောက်ဆုံးတော့ အငိုပွဲဆင် ပြီး ရန်ပွဲကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရတာပဲ သူ့ရင်ခွင်မှာ၊ သူ့အပွေ့ အဖက်မှာ။ သူ့မျက်နှာကို မော့ကြည့်မိတယ် စိုးရိမ်ပူပန်မှု ၀မ်း နည်းမှုအချို့နဲ့ပေါ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း မုန်းပါတယ် စိတ်တို ရင် လက်ထဲရှိတာတစ်ခုခုနဲ့ ပစ်ပေါက်လိုက်ရမှ ကျေနပ်တတ် တာကို။ သူဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်ချစ်သူ ဟာ မူးယစ်ဆေးလိုပါပဲ ရီရီဝေေ၀နဲ့ တိမ်းမူးတက်မက်စေတာ။ သူနဲ့မခွဲနိုင်ဘူး...... သူ့ရင်ခွင်ဟာ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်။
ကျွန်တော့်မျက်နှာလေးကို သူ့လက်လေးနှင့် ငြင်ငြင်သာသာ ဆွဲမော့စေကာ နှုတ်ခမ်းကို နုနုညံ့ညံ့အနမ်းပွင့်ခြွေ ပါတယ်။ 'ဘေဘီ....ကိုယ် တကယ်တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ၊ မင်းစိတ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တကယ်မသိခဲ့ဘူး'
စိတ်ထဲထောင်းကနဲဖြစ်သွားပြီး သူ့ရင်ခွင်ကိုတွန်းဖယ်လိုက် မိပြန်ရော။ ဒီပုံပြင်တွေကြားနေရတာအမြဲလေ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ ပြန်လည်ဆွဲဖက် ခြင်းကိုခံရပြီး ချော့မော့မှုလေးတွေကြားမျော ရတော့တာ။
'Ok, alright!ကိုယ်မှားတာသိပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကတိပေး တယ် မင်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် ကိုယ်မလုပ်တော့ ဘူးဆိုတာ၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုလည်း မင်းကတိပေး ဒေါသထွက် တိုင်း တစ်ခုခုကို ပစ်ပေါက်ခွဲတာ အော်ဟစ်တာတွေ မလုပ် တော့ပါဘူးလို့။ ကိုယ်တို့ ခွဲနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး ပစ္စည်း တွေပဲ အလကားဖြစ်တယ်'
စကားလုံးတွေကြား ကျွန်တော့်ပါးပြင်တွေ နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်း တယ်။ ပူနွေးနေတဲ့ သူ့အနမ်းကို တစ်ချက်ရှောင်လိုက်ရင်း သူ့ ရင်ခွင်မှာ မှီတွယ်ခိုကပ်မိပါရဲ့။ သူ့ရင်ခွင်ထဲက ကိုယ်နံ့ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် မေ့ဆေးများလား။ ကျွန်တော် သူ့ကျောပြင် ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် သိုင်းဖက်မိရပေါ့။
ကျွန်တော့်မျက်နှာကို အသာဆွဲမော့...သူ့နှုတ်ခမ်းတွေဟာ နူးညံ့စွာ.....အမှန်တကယ်နူးညံ့စွာ ထိခတ်ပါတော့တယ်။ ရင်ခွင်ထဲ ရှိန်းတိန်း ဖိန်းတိန်းနဲ့ အနမ်းဦးကိုရသည့်အလား ရင်ခုန်မိရပေါ့။ ရန်ဖြစ်ပြီးပြန်ချစ်ကြတော့ ဒီလိုပဲ ခံစားရသ လားမသိ။ အိုး....ကျွန်တော့်ဗိုက်သား နှင့်ထိနေတဲ့ သူ့ငပဲဟာ တဖြည်းဖြည်းဖောင်းကြွလာတယ်။ ဂျင်းဘောင်းဘီထဲမှာ ရုန်း ကန်စပြုလာပြီ။ အပြင်ကိုဖောက်ထွက်ချင်လာပြီ ထင်ပါတယ်။ မာထောင်လာတဲ့ သူ့ငပဲကို ဘောင်းဘီအပေါ်ကနေ အသာ ဖျစ်ညှစ်လိုက်မိတော့ ကွမ်းသီးခေါင်းက တဆတ်ဆတ်ခုန်။ ဂျင်းဘောင်းဘီက ကြယ်သီးတွေကို တစ်လုံးခြင်းဖြုတ်ကာ ချွတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ငပဲဟာ ကျွန်တော်ရှိရာဆီတန်းကနဲ ညွှန်နေရော။ ကောင်းတယ် အကြာကြီးမစောင့်ရတော့ဘူးပေါ့။
ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူး။ အဲဒါအမှန်ဘဲ။ သူကျွန်တော့်ကို ညာတယ် မချစ်ဘူး ဒါကိုကျွန်တော်သိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် တို့မတွေ့ဘဲလည်းမနေနိုင်ဘူး။ အကြောင်းတစ်ခုခုရှာပြီးတွေ့ ကြမြဲ။ ရန်ဖြစ်ကြမြဲ။ ပြီးတော့ လိင်ကိစ္စကို ရှာဖွေအရသာခံမြဲ ပါပဲ။
ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှတွေးမထားမိတဲ့ မြကျွန်းသာရဲ့ ကားပက်ကင်မှာ ညအချိန်ကားထဲ အရှက်မရှိ အလုပ် ဖြစ်ခဲ့ ကြသေးတယ်။ ပြီးတော့ အတွဲတွေသွားတတ်ကြတဲ့ နေရာ မှောင်ရိပ်တွေမှာ ဆက်လက်ဖြစ်ပျက်ကြသေးတယ်။
အတွေ့ကိုမရှောင်နိုင်တာများလား၊ ဟုတ်မယ်ထင်ပါရဲ့.....သူ ပေးတဲ့သာယာမှုမျိုး ကျွန်တော်ဘယ်တုန်းကမှ မရဖူးဘူး။ အပွေ့အဖက်၊ အနမ်းအပြု....အို ကျွမ်းကျင်လိုက်တာ။ သူဟာ လိင်နတ်ဘုရားပါပဲ။
သူ့မိဘတွေမရှိတဲ့ တစ်ပတ်သောအချိန်လေးဟာ ကျွန်တော်တို့ အတွက် လောကနိဗ္ဗာန်ပါ။ ဘယ်မှမသွားဘူး တစ်နေကုန် အိမ် ထဲမှာပဲ။ တစ်သက်မှာ ချစ်တဲ့သူနဲ့ တစ်မိုးအောက်နေရပြီဆိုပြီး ပျော်ခဲ့ဖူးတာပေါ့။ အစ်ကို့ကိုချစ်တယ်တဲ့....တိမ်းမူးမှုသက်သက်နဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကား လား အခုချိန်ပြန်စဉ်းစားမိရပါတယ်။
လူတစ်ယောက်မှာ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးဆိုတာ မရှိရဘူးလား။ ရည်းစားဖြစ်ရုံနှင့် အရာရာပိုင်စိုးခွင့်ပေးရရောလား?။ တစ်ကိုယ် ရေသန့် ရှင်းဖို့ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်နေတာ ၀တ်တာစားတာမှာ သူ ပြောသလို စဉ်းတောင်မစဉ်းစားမိဘူး။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဆို တာရော မရှိရဘူးလား?။ သူကရော သူပြောသလို စောင့်ထိန်း ရဲ့ လား?။ ကိုယ့်ထက်ငယ်တာဆိုတော့ ကလေးဆန်သလားလို့ ထင်မိပေမဲ့ စိတ်ထဲ ခုမိသားပါပဲ။
ဒါပေမဲ့လည်းလေ လမ်းခွဲဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ စေ့စပ်လက်စွပ်လို မျိုးတစ်ယောက်တစ်ကွင်း ၀ယ်ဝတ်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ ဆင်တူလက်စွပ် လေးကို သူမပေးချင်ပေးချင်နဲ့ ပြန်ပေးတယ်။ အတော်ဆိုးတဲ့ငါ လို့ အပြစ်တင်ရမလားပါပဲ လမ်းခွဲတဲ့နေမှာတောင် သူနဲ့ လိင် ကိစ္စပက်သက်ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်........ဟူး။
ငြင်သာစွာ သူ့ကွမ်းသီးခေါင်းကိုပွတ်သပ်မိတော့ pre-cum လေးတွေလက်မှာစိုစွတ်ရတယ်။ သူ့ငပဲကို ဆုပ်ညှစ်ပစ်မိချိန်မှာ သူ့အနမ်း တွေဟာ ကျွန်တော့်လည်တိုင်၊ ပါးပြင်နှင့် နှုတ်ခမ်း အနှံ့ပြန်လည်ကျရောက်လာရော။ သူ့လျှာဖျားလေး ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲ ထိုးမွှေလာရင်း တစ်ခုခုကိုဖွေရှာတော့ ကျွန်တော့် လက်တွေက ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားပစ်တယ် မာသထက်မာ လာအောင်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု တုန့်ပြန်မှုတွေကြောင့် ကျွန်တော့်လက်တွေကို ရပ်တန့်လိုက်တယ်။ သူ့ကိုမပြီးသေး စေချင်ဘူး။
နူးညံ့လှပတယ်လို့ သူပြောပြောနေတဲ့ ကျွန်တော့် လက်ဖ၀ါး အစုံနဲ့ သူ့ရှပ်အင်္ကျီအောက်ကို အသာလက်လျှိုလိုက်ကာ ပြေပျစ်ချောမွတ် နေတဲ့ ဗိုက်သားလေးတွေကို ပွတ်သပ်သလို ရင်ခုန်ဖွယ် အသည်းယားစေတဲ့ ရင်အုပ်အလယ်ကနေ ဆီးစပ် အထိ ဆက်နေအောင်ပေါက် နေတဲ့ မွှေးညှင်းနုလေးတွေကို လည်း အသာပွတ်သပ်မိသည်ပေါ့။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို အသာညှစ်ညှစ်ပေးလိုက်တော့ တဖြည်းဖြည်း နဲ့မာလာတယ်။
ကျွန်တော်တို့အနမ်းပွဲဆင်နေရင်း ကစားနေတာကိုလည်းရပ် လိုက်ကာ သူ့အင်္ကျီကိုဆွဲချွတ်လိုက်ပါတယ်။ ရှပ်အင်္ကျီမရှိ ခပ် လျော့လျော့ ဘောင်းဘီနှင့် သူ့အသွင်အပြင်ဟာ အသက်ရှူ မှားစေတဲ့ ကျွန်တော့်အသည်းစွဲ။
လက်အစုံကိုဘေးချကာ သူ့ကိုငေးမိနေတဲ့ ကျွန်တော့်လက်ကို အသာစွဲကိုင်ကာ အိပ်ခန်းရှိရာစီခေါ်ဆောင်ပါတော့တယ်။ သူ ဆွဲခေါ်ရာ နောက်ကို လှမ်းလိုက်လာရင်း ခြေလှမ်းတိုင်းတင်း ကားနေတဲ့ တင်ပါးလှလှတွေကို နောက်ကနေ အသာငမ်းမိရပါ တယ်။ ကြိုက်နှစ်သက် မိတဲ့ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတိုင်း မှာ ဒီအပိုင်းကို ရင်ခုန်ရဆုံးပါ။ အစွမ်းကုန်လှပတဲ့ တင်သားဆိုင် များပေါ့။ အိပ်ခန်းထဲရောက်တော့ ခုတင်ပေါ်ကျွန်တော့်ကို တွန်း လှဲကာ အ၀တ်တွေချွတ်ပေးပါတော့တယ်။ ဂျင်းဘောင်းဘီအ တွင်းက ၀တ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီတိုပါမကျန် သူဆွဲချွတ်ပစ် လိုက်တာ။
ပြင်းပျတဲ့ သူ့လှုပ်ရှားတက်ကြွမှုတွေဟာ ကျွန်တော့်ကို ပိုမို ရင်ခုန်ပူနွေးစေပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းခြင်း ဂဟေဆက်ကာ ဖက် တွယ်ထားမိကြ တယ် အချိန်အတော်ကြာ။ ပြီးတော့ တစ်ခါ ကျွန်တော်တို့အကြိုက် အနေအထား ခုတင်ပေါ်လှဲလိုက်ကြ တယ်။ သူ့ငပဲဟာ လုံးဝန်းရှည် လျားလှပပါတယ်။ မွှေးရနံ့ သင်းနေတဲ့ သူ့ငပဲကို ကွမ်းသီးခေါင်းလေး ငုံစုပ်ပေးရာကနေ အဆုံးထိမျိုချလိုက်တာ ကျွန်တော့်နှာခေါင်းနဲ့ အမွှေးနု တစ်ချို့ ပေါက်နေတဲ့ ရွှေဥတွေထိတဲ့အထိပေါ့။ သူလည်းပဲ ထို့အတူ အာခေါင်ထဲထိသွင်းလိုက်ရင်း လျှာနဲ့ရစ်ပတ်ကစားပေးတာ ...အာ...ဖီးလ်ပဲဗျာ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပုလွေ အပြိုင် မှုတ်ကြရင်း တစ်ချက်တစ်ချက် သူ့balls တွေကို ပွတ် သပ်ပေး မိတယ်။ လုံးဝန်းကြီးမားလိုက်တာများ man juice တွေအပြည့် ထင်ပါရဲ့။ ရွှေဥတွေကို တစ်လုံးခြင်းငုံထွေးလိုက်ရင်း လျှာကစား မိတော့ အကြော တွေတင်းကနဲ တင်းကနဲဖြစ်ကာ ပေါက်ကွဲဖို့ အသင့်ဖြစ်ပြီ ထင်ပါရဲ့။ မာထောင်နေတဲ့ သူ့ငပဲကို စုပ်ယူနေ မိတော့ သူလည်း ကျွန်တော့်ဟာ ကို မျိုချနေရာကနေ ကွမ်းသီး ခေါင်းထိ ဆွဲထုတ်ပြီး ထိပ်အရေပြားကို လျှာကစားနေတာများ ...လေ။
အတူတကွ စွဲလမ်းတက်မက်မှုတွေ အဆုံးစွန်ထိ ခံစားစွဲလန်း ကြပြီး ခဏအကြာမှာတော့ ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင် တော့ဘူး ပန်း ထုတ်ချင်လာမိပြီ။ သူ့အပြုအစုက ဆရာကျ တယ်မဟုတ်လား။ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို ပွတ်သပ်ပြီး ကွမ်းသီးခေါင်းကို 'ပလွတ်'ကနဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်တာမှာ ထိန်းချုပ်မှုကင်းစွာနဲ့ သူ့ပါးစပ်ထဲအပြည့် ရွှေရည်တွေ ဖြည့် ပေးမိပါတော့တယ်။ တစ်စက်မကျန်ညှစ်ထုတ်ပြီး ချိန်မှာတော့ သူ့အလှည့်လေ။ သူကတော့ ကျွန်တော့်ခေါင်းကို အသာထိန်း ကိုင်ကာ သူ့တင်ပါးတွေကိုအားယူလျက် mouth-fucking လုပ်ပါတော့တယ်။ သူ့ငပဲအသွင်းလုပ်ချိန်မှာ၊ ပြန်အထုတ်မှာ လျှာနဲ့သရပ်ပေးမိတော့ သူ့အတွက် tempo မြင့်ရသပေါ့။
တစ်ချက်တစ်ချက် သူ့ငပဲကို အာခေါင်ထဲထိ လျှောကနဲ ဖိ သွင်းတတ်သေးတော့ ကျွန်တော့်မှာ အသက်ရှူမှားရသေး။ သူ့အရှိန်မြင့်လာ ချိန်မှာတော့ တစ်ဖက်သားအပေါ် သူအာရုံ မစိုက်တော့ပါဘဲ ဖီးလ်အမြင့်ရဖို့သာသူလုပ်ပါတော့တယ်။ အဲဒီအခါမှာ ကျွန်တော်လေ ကိုက် ပစ်ချင်မိသေးတော့။ သူ့ တင်ပါးတွေအဆုံးထိတစ်ချက်ကော့အပြီးမှာတော့ ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲ မလိုင်အဖတ်တွေ အများအပြား ခွံ့ကျွေး ပါတော့ တယ်။ ကျွန်တော့်လျှာပေါ် နှုတ်ခမ်းတွေအပေါ်မှာ သူ့အရည် တွေဖွေးနေရော။ သူ့ငပဲကို မလွှတ်ပေးဘဲ အတန်ကြာဆက် စုပ်ပေး မိရင်း တကယ်ပျော့ခွေသွားမှ လွှတ်ပေးတာပေါ့။
နှစ်ဦးသားဇာတ်လမ်းဆုံးတော့ သူကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကို သူ့နံ ဘေးဆွဲယူကာ လက်မောင်းထွားထွားတွေနှင့် ဖက်တွယ်ထား ပါတော့ တယ်။ နောက်တော့ နူဖူးလေးတွေကို ငြင်သာစွာ အနမ်းပေးသလို နှုတ်ခမ်းကိုလည်း ရွရွလေးပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ လျှာတွေပေါင်းစပ်မိ ကြချိန်မှာတော့ ငန်ကျိကျိ အရသာအရည် နှစ်ခု ရောနှောပြီး ငန်ချိုချို အရည်အပျစ်တွေဖြစ်စေရော။ ခဏ အကြာမှာတော့ ကျွန်တော် သူ့ရင်ခွင်မှာမှေးမှိတ်မိရပါတယ်။
'See baby? ကိုယ်တို့တွေ အဖြစ်ကိုစဉ်းစားကြည့်၊ ကိုယ်ဘယ် သူနဲ့မှ မင်းကိုမလဲနိုင်ဘူးဆိုတာ။ ပြီးတော့ နောက်တစ်ယောက် မရှိဘူး ဆိုတာလေ'
သူ့နို့သီးခေါင်းမာမာလေးတွေကို ဘာရယ်မဟုတ်ကလိမိရရင်း ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်ကာ ဟုတ်ကြောင်း သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ ရန်ဖြစ် လိုက် စိတ်တိုလိုက်နဲ့ နောက်ဆုံးအိပ်ယာပေါ်မှာပဲ အရေးအခင်းပြီးဆုံးသွားတတ်တာ စက်ဝိုင်းတစ်ခု ပတ်ချာ လည်သလိုဖြစ်နေပြီဆိုတာ တွေးဖြစ်ရသေးပေါ့။ အမြဲ လိုလို အတူတူပဲဖြစ်စဉ်များဟာ။
နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုရင်တော့ ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ဦးတည် ချက်ထားရမယ်.........။
ဦးတည်ချက် ရည်မှန်းချက်တွေနှင့်အတူပါပဲ ဦးလေးတွေရှိရာ ကနေဒါကို ကျွန်တော်သွားဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။ ရောက်စမှာ သိပ်အဆင် မပြေ ပါဘူးဗျာ။ အလုပ်ရွေးနေလို့လေ။ အခုတော့ အဆင့်မြင့် ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့ ရှေ့မျက်နှာစာမှာ Front Desk Manager ရာထူးနှင့် အဆင်ပြေချောမွေ့ခဲ့ရပေါ့။
ပိုက်ဆံတွေကို စနစ်တကျသုံး၊ အိမ်ကိုပို့၊ အားလပ်ချိန်မှာ နေရာ အနှံ့ခရီးတွေထွက် ဒေသန္တရဗဟုသုတပေါ့။ ညပိုင်းအင်တာနက် သုံးရင်း တစ်ခါတလေ အိမ်ကမိသားစုနဲ့စကားပြောရ၊ မာမီနှင့် သတင်းစုံပြောကြနဲ့ အပန်းဖြေရတယ်။ သူတို့ကို ဘုရားသခင် စောင့်ရှောက်ပါ စေ.....။
ကိုယ့်စိတ်ကူးတွေ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဒီနိုင်ငံရောက်လာပေမယ့် တစ်ခါတလေတော့ မြန်မာပြည် ကိုလွမ်းပါတယ်။ တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်ဆို ဒီမှာ နိုင်ငံသားခံယူခွင့် ရပြီလေ။ အသက်ကြီးလာရင် ကနေဒါမှာခြောက်လ မြန်မာ ပြည်ခဏ တစ်လှည့်စီနေမလားလို့ စိတ်ကူးထားပါသေးတယ်။
စကားမစပ်ပြောရရင် ကျွန်တော်သီချင်းဆိုတာ အရမ်းဝါသနာ ပါပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကတော့သိတာပေါ့ ဘုရားကျောင်း မှာ သီချင်းဆို နေကျမို့။ မြန်မာပြည်က မထွက်ခွာခင်မှာ ပရိုဂျူဆာတစ်ဦးရဲ့ စီစဉ်ပေးမှုနဲ့ ချစ်သူများနေ့စုံတွဲတေး အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုမှာ မဇမ်နူးနဲ့တွဲဆို ဖြစ်ပါတယ်။ အသံအား ကောင်းတဲ့ သူမကတောင် ကျွန်တော့်အသံပါဝါကို ချီးကြူး သဘောကျကြတယ်။ ၀ါသနာအစပျိုးမိတော့လည်း ကနေဒါကို မသွားချင်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ပေါ်လာမိသေး။ ဒါပေမဲ့ ဘ၀ရှေ့ရေး ခိုင်မာမှုဆိုတာ အရေးပါတယ်မဟုတ်လား။
ဒီမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့ မြန်မာလူမျိုးကောင်လေးအချို့ နှင့် တွေ့မိရတော့ မြန်မာပြည်မှာလမ်းခွဲခဲ့တဲ့ ချစ်ဦးသူကို သတိရမိ သေး။ ရယ် တော့ရယ်စရာပါ.....တကယ်လို့ ကနေဒါမှာ အဆင် ပြေတဲ့အခါ သူ့ကိုစပွန်ဆာပေးပြီးခေါ်မယ် ဆိုတဲ့ စကားမှတ် ထားပြီး အခုအချိန် ကျတော့ ကျွန်တော့် G-talk ထဲ အကောင့် အမျိုးမျိုးနဲ့ ၀င်ကာပြန်ချဉ်းကပ်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်သိ တယ်ဆိုတာ ရိပ်မိတော့ ပြန်ချစ် ပါရစေ အစ်ကိုရယ်တဲ့..... လေ။
ဒီနှစ် ဒီဇင်ဘာမှာမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာမယ်။ မာမီတို့ကိုခေါ်ပြီး ထိုင်းကိုသွားလည်မယ်လို့ စဉ်းစားထားတယ်။ မိဘဆိုတာ ချစ်သူထက်ပို အရေးပါပါတယ်။ မာမီတို့စိတ်ချမ်းသာဖို့ ပိုအရေး ကြီးတာပဲ။ မြန်မာပြည်ကမပြန်ခင်တော့ ညီလေးလည်း ကျွန်တော့်နောက်လိုက်လာနိုင် အောင် သင်တန်းတွေတက်ခိုင်း ခဲ့မယ်။ စီစဉ်ပေးခဲ့မယ်လေ။
အိုး....ကျွန်တော့်အကြောင်းတွေကို ပြောပြမိတာက ခင်လို့ ယုံကြည်လို့ပါ။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ခံစားရတာကို ရင်ဖွင့်တဲ့ သဘောပါ။ အလုပ်သွားရတော့မယ်ဗျို့....နောက်မှဆက်ပြောကြတာပေါ့။
Alex Aung (18.2.2010)
စာကြွင်း။ ။ ကနေဒါရောက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို အမှတ်ရလို့ပြန်တင်လိုက်ခြင်းပါ။
Posted by Alex Aung at 8:15 PM No comments:
အပေါ်ထပ်ဝရံတာကနေ ကျောင်မြက်ခင်းပြင်မှ လမ်းလျှောက်သွားနေသူ တစ်ယောက်ကို မြင်နေရပါတယ်။ ဟော...အရပ်ရှည်ရှည် ဆံပင် နက်နက်နှင့် ကောင်ချောလေးဗျ...ကျွန်တော်ရပ်နေတဲ့နားကိုမော့ကြည့်ရင် ကောင်းမှာ။ သူအပေါ်ထပ်ကိုတက်လာပါစေလို့ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲ ဆန္ဒပြုမိပါတယ်။ ရှီး...တောင့်တင်းဖောင်းကြွနေတဲ့ သူ့ပေါင်တံတွေကြား ဒူးထောက်ထိုင်ပြီး...ဟိ...ဟိုဟာလုပ် ပေးရရင်လို့ တွေးမိပြီး ကျွန်တော့်ငပဲက မာချင်ချင်။ လက်တစ်ဖက်နှင့်ပိုက်ထားတဲ့ စာအုပ်တစ်ထပ်ကို အခြားလက်တစ်ဖက်နှင့်ပြောင်းပွေ့လိုက်တယ် တစ်ပါးသူအမြင်မှာ တည်ငြိမ်တဲ့ သူအဖြစ် မြင်စေချင် တာကိုး။ သူ လှေကားကနေတက်လာပြီး ပထမအလွှာက စာသင်ခန်းတစ်ခုထဲဝင် သွားတာကို ကျွန်တော်ကြည့်နေမိတယ်ဗျ။
'ဟူး...သောက်ရမ်းမိုက်တယ်' သူတော်တော် hot တာပဲလို့ကျွန်တော့်ဖာသာတွေးနေမိပါရဲ့။
ဘာမှမဟုတ်ပဲ စိတ်အားထက်သန်မှုက ထကြွလွန်းပါတယ်။ ဒီကိစ္စကိုကျောင်းမှာ မဖန်တီးသင့်ဘူးလေ။ ကျွတ်...အတော်ဆိုးတဲ့ ည တစ်ညပါပဲ။ တစ်ချို့သောညတွေမှာတော့ တော်တော်များများကျောင်းသားတွေ နေရာအပြည့်ရှိနေတတ်ပြီး တချို့သောညတွေမှာတော့ တစ်ယောက်တလေမှ မတွေ့ရ။ လွန်ခဲ့တဲ့လက ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ ငနဲတစ်ပွေဟာ ခပ်ဆိုးဆိုး လူတစ်ယောက်ရဲ့ မဟားတရား နှောင့်ယှက်ခံရတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ် ကျောင်းသတင်းစာမှာပါလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ကျောင်းသားတစ်ချို့တော်တော်ကြောက်နေကြတာကို ကျွန်တော်တွေးကြည့်လို့တော့ရသား။ သူတို့တွေ ရူးနှမ်းနေလို့ဖြစ်မှာ။ သတင်းစာထဲပါသလို နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီး အဲကိစ္စက ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားလို့နော်။ ပြီးတော့ လူတိုင်းလိုလို အဲဒီကျောင်းသားသုံးအိမ်သာထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စသိနေခဲ့ပြီဗျ။ ကျောင်း campus ရဲ တွေသာ သောင်းကျန်းသွားတဲ့ငနဲကို အမှန်တကယ် သိချင်ခဲ့ရင် ဂရုစိုက်ခဲ့ရင် ဖြေရှင်းပြီးတာ အချိန်တော်တော်ကြာနေလောက်ပြီလေ။
ဟိုငေးသည်ငေးနှင့် ကြည့်ပြီး သွားရေကျ၊ ပေါင်ကြားက ညီဘွားကို မာစေလောက်တဲ့ဘဲတွေကိုမြင်တွေ့ကြုံဆုံခဲ့ရတာ ဘယ်လောက်များ နေပြီလဲ တွေးကြည့်မိပါတယ်။ သူတို့ထဲက တစ်ချို့ကတော့ပြန်မတွေ့ရပါဘူး။ အချို့ကိုတော့ campus မှာဟိုသည်ပြေးလွှားရင်တော့ မြင်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နယ်မှာ ကောလိပ်နှစ်နှစ်တက်ပြီး ဒီဂရီယူဖို့ရောက်လာကတည်းက ဒီကျောင်းမှာ အလန်းဇယားငနဲလေးတွေ အများကြီးဆိုတာမြင်မိသား။ တစ်ခါတလေများ ကျောင်းစာကြည့်တိုက်မယ် ကျောင်းစာလုပ်ရင်း ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်ရတာ မကြာ ခဏ။
ကျွန်တော့်လက်မှာပတ်ထားတဲ့ နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ ၁၁နာရီထိုးပြီလို့ မိနစ်သုံးဆယ်စွန်းနေပြီ။ အချိန်က ညသန်းခေါင်ရောက်နေ တာ သတိမထားမိတာနာတယ်။ အရေးထဲ ဆီးသွားချင်တော့ ကျွန်တော့်ညီဘွားက ဘောင်းဘီထဲက ခေါင်းထောင်ပြနေတာ။ ဘယ်သူမှ မရှိတဲ့ သန့်စင်ခန်းထဲ တုန့်နှေးနှေးခြေလှမ်းတွေနှင့်ဝင်သွားကာ ဆီးသွားကြွေကမုတ်မှာ ရွှေပန်းကရေတွေ အားရပါးရသွန်ဖို့ပြင်လိုက် တယ်။ နောက်နေ့ကျောင်းချိန်က နည်းတယ်ဆိုတော့ ခပ်ကဲကဲငနဲတစ်ပွေနဲ့ Date မရတော့ဘူး ဒီညအတွက်...နာတာပဲ။ နက်ဖြန်ည လောက်တော့ တစ်ယောက်ယောက် ဖန်မှဖြစ်မယ်။ အေးစက်စက်ကြွေကမုတ်နားကပ်လိုက်ကာ ပေါင်ကြားက ရွှေမြင်းနှင်တံကြီးကို ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ သိမ်းထားသမျှ အကုန်ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါရဲ့။ ကျွန်တော် သန့်စင်ခန်းတံခါးဖွင့်သံကြားလိုက်ရပါတယ်။
'နောက်ပြန်လှည့်မကြည့်နဲ့' ကျွန်တော့်နောက်က ခပ်တိုးတိုးလေသံနှင့် ပြောသံတစ်ခုကြားရတယ်။
ကျွန်တော်...ကျွန်တော် သူပြောတဲ့အတိုင်း ရှေ့တည့်တည့်ကိုပဲကြည့်ကာ ငြိမ်နေလိုက်တယ်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ကျွန်တော့်နားကပ်လာ တာကို ခံစားရတယ်ဗျ။ သူစိမ်း ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းပြီး တစ်လှမ်းတိုးလာတိုင်း ကျွန်တော့်ငပဲက စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ ပိုပိုမာလာတယ် လေ။ သူ့အသက်ရှူငွေ့နွေးနွေးကို ကျွန်တော့်လည်ဂုတ်မှာ ခံစားနေရပြန်ရော။ သူ့လက်က မာတောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကိုဆုပ် ကိုင် တယ်။ 'အ..အ' သူ့အကိုင်အတွယ်က နုညံ့ပေမဲ့သန်မာသား။ ကျွန်တော့်ငပဲကနောက်ဆုံး ဆီးတစ်စက်ပန်းထုတ်ပြီးချိန် သူက ခပ်ဖြေး ဖြေးပွတ်သပ်ပြီး ကစားပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကိုနောက်က ခပ်မာမာအဖုအထစ်ကဖိကပ်ထားတာကလည်း တစ်ပြိုင် တည်းပါ။ ကျွန်တော့်ငပဲကို လက်နဲ့ကိုင်ထားတာကနေလွှတ်ပြီး ဘောင်းဘီကကြယ်သီးတွေဖြုတ်ချလိုက်တယ်။ ရုတ်တရက် ညစ်ပေနေ တဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ် ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီ ပုံကျသွားရော။ သူ့လက်တွေက ၀ိုင်းစက်ပြည့်တင်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်တင်ပါးအစုံကို ဆွဲကိုင်ပြီး တင်သားတွေကို ခပ်ပြင်းပြင်းညှစ်တယ်။ 'အား....အ..အ' အကွဲကြောင်းတလျှောက် သူ့လက်ချောင်းအချို့ကိုမျှော့သွေးစမ်းရင်း ခရေပွင့် ကို ကလိတာ။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ဖိပြီးသွင်းတယ် ပထမတော့ တစ်ချောင်းနှင့် ချဲ့နေရင်း စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာတော့ သုံးချောင်းမြောက် လက်ချောင်းကိုထည့်တယ်။ သူ့လက်ချောင်းတွေကို နက်သထက်နက်အောင် ဖိဖိသွင်းတာပါ။ သူ့အတွက် ကျွန်တော်ကအသင့်...သူ့ ငပဲကြီးအတွက် အသင့်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်နေခြင်းထင်ပါတယ်။
လွတ်နေတဲ့ သူ့တခြားလက်နှင့် သူ့ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဆွဲဖြုတ်ပြီး မာတောင့်နေတဲ့ သူ့ငပဲကိုဆွဲထုတ်နေသံကြားတယ်။ ဘယ်လောက် ကြီးမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မှန်းဆလို့ရတယ်နော်။ သူ့လက်ချောင်းတွေရဲ့ အရွယ်အစားနှင့် ချဲ့ထားတာကြောင့် 'အိုး...မိုင်..ဂေါ့' သူ့ လျှာဖျားလေးဟာ ကျွန်တော့်နားရွက်ပေါက်ထဲကိုတိုးဝင်ကာကလိတယ်..အာ...လျက်တယ်။ ပြီးတော့ လည်တိုင်တလျှောက် အစုန် အဆန် လျက်တယ်။
'အာ...လုပ်မှာဆိုလုပ်တော့ဗျာ' ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက အဲဒီစကားလုံးထွက်သွားတာကို ကြားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် ဒီသူစိမ်းကို အပြည့်အ၀ပေးလိုက်မိပြီပဲ။
ကျွန်တော် ဦးခေါင်းကို တဆတ်ဆတ်ငြိမ့်ပြပြီး 'ဟုတ်ကဲ့' သဘောမျိုးလုပ်ပြလိုက်တယ်။ သူ့လက်ချောင်းတွေကို ကျွန်တော့်ခရေထဲက တ ဆစ်ဆစ်ထုတ်ပြီးနောက် ကျွန်တော့်တင်ပါးနှစ်ခုကို အသာဆွဲဟလိုက်တာပေါ့နော်။ ကျွန်တော့်မှာ သူလုပ်တာကို လက်ခံဖို့ စိတ်ထဲရဲဆေး တင်နေရတယ်။ ကျွန်တော်တွေးထင်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ သူဟာ ငထွားတစ်ယောက်။ သူ့ငပဲကြီးထက် အရင်သူ့လက်ချောင်းလေးတွေ က မပြောပလောက်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော့်တင်ပါးဆုံတစ်ခုလုံးကြိမ်းပြီး နာကျင်သွားတယ်။ ကျွန်တော့်မျက်ရည်လည်အောင် သူလုပ်မယ့် ပုံဟန်ကြောင့် ကြွေကမုတ်တပ်ထားတဲ့ ဘောင်တွေကိုဆွဲကိုင်လိုက်ရတယ်ပေါ့။ စိတ်လှုပ်ရှားရတဲ့ မိနစ်တွေကိုကြိုက်မိပါရဲ့လေ။
သူစိမ်းက သူ့ဒစ်အရှည်ကြီးအဆုံးထိ မ၀င်မချင်း မရပ်တော့ပါဘူး။ အဆုံးထိဝင်သွားတော့လည်း ကျွန်တော့်လက်တွေကို သူ့လက်နှင့် အုပ်မိုးကိုင်လိုက်ကာ နံရံမှာဖိကပ်စေရင်း ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်း နောက်ကနေအသာဖိတွန်းကာ 'မင်းဆောင့်သွင်းတာကို ခံချင် လား' တဲ့သူကမေးတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကြိုက်တဲ့အကြောင်း ခရေထဲမြှုပ်နေတဲ့ သူ့ငပဲတုတ်တုတ်ကို ဖင်ကြွက်သားတွေနှင့် အားရ ပါးရညှစ်ပြလိုက်တယ်။
'ကြိုက်တယ်!!' ကျွန်တော်အော်ပစ်လိုက်တယ်။ 'ခင်ဗျား -ိုးတာခံချင်တယ်'
ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေကို သူဖျစ်ညှစ်လိုက်ရင်း ငပဲကိုလည်းအပြင်ကိုပြန်ဆွဲထုတ်တယ်။ ကျွန်တော့်ခရေ၀ကနေ လွတ်လွတ်ကျွတ် ကျွတ်လျောကနဲထွက်သွားတာကို သိရပြီးနောက်မှာတော့ ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်သွင်းလိုက်တာကို ခံစားလိုက်ရပါရဲ့။ တစ်ချက် တစ်ချက် ဆောင့်သွင်းတိုင်း အားပိုပိုပါလာတယ်။ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ နာကျင်မှုနဲ့အတူ ရရှိတဲ့ ဒီလိုဖီလင်မျိုး မခံစားခဲ့စဖူး။ သူလုပ်နေတာတွေက ကျွန်တော့်ကို အရူးထစေသလိုပဲဗျ။ သူ ဆောင့်ဆောင့်သွင်းတိုင်း ကျွန်တော်အော်တဲ့အခါ သူက သဘောတကျရယ်တယ်လေ။
သူ့အသက်ရှူသံတွေနှေးလာတာနဲ့အတူ သူ့အထုတ်အသွင်းလုပ်ဆောင်ချက်တွေကလည်း အရှိန်လျော့လာတယ်။ သူအားပါးတရ အော်ညည်း၊ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်၊ ပြီးတော့ သူ့ငပဲကိုအဆုံးထိ ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲဖိသွင်းကာ ရွှေရည် တွေအပြည့်ဖြည့်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲဝယ်ပြည့်ရုံမက ကျွန်တော့်ပေါင်တံတလျှောက်စီးကျသွားတာကို ခံစားရပါရဲ့။ သူ ကျွန်တော့် လက်ချောင်းတွေကိုဖြေလွှတ်ပြီး နားရွက်နားကပ်ကာ 'မင်းအလှည့်' တဲ့ပြောပါတယ်။
သူ့လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့် နို့သီးခေါင်းလေးကို ဖျစ်ညှစ်ပြီး တခြားလက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ငပဲကို ကစားပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့လက်ချောင်းတွေနဲ့ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်ပြီးကစားတာ သိပ်မထိန်းနိုင်တော့တဲ့ ကျွန်တော့်ဆီးသွားကြွေကမုတ် တလျောက် ပျစ်ချွဲချွဲအရည်တွေ တွဲလွဲခိုသွားစေပါရော။ ကျွန်တော်ပန်းထုတ်တဲ့ကိစ္စပြီးချိန်မှာ သူက ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို တဖြန်းဖြန်း ရိုက်ပါတယ်။
'နက်ဖြန် အတန်းထဲကျမှတွေ့ကြတာပေါ့ ဘော်ဒါ' သူပြောပြောပြီးချင်း အခန်းအပြင်ဘက်ပြေးထွက်သွားပါတယ်။
ကျွန်တော် ဒူးတွေညွှတ်ကျလောက်အောင် ပင်ပန်းသွားပါတယ်။ သူ ဘယ်သူလည်းဆိုတာ ကျွန်တော်သိချင်ပါဘိ။ အသံထွက်ခဲ့ပုံက ရင်းနှီးနေသလို ခံစားရတယ်ဗျ။ ကျွန်တော် မတ်တပ်ရပ်ဖို့ကြိုးစားရင်း တပြိုင်တည်းလို မတ်မတ်ရပ်လိုက်ကာ အခန်းအပြင်ဘက်ကို အပြေးလှမ်းလိုက်တယ်။ ကော်ရစ်တာမှာ ဘယ်သူမှမရှိ။ မြင်ကွင်းထဲမှာလဲ တစ်ဦးမှမမြင်။ ခန်းမထဲထိ ပြေးဆင်းဖို့ကြိုးစားတော့လည်း တင်ပါးတွေက ကြိမ်းစပ်နာကျင်နေတာ လမ်းလျှောက်ဖို့တောင် ခက်ခဲပါရဲ့။ အဆောင်ကိုပြန်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေဟာ ထော့နဲ့ထော့နဲ့ ဖြစ်နေသလား ကိုယ့်ဘာသာတွေးမိပါတယ်။
ကျွန်တော်နေတဲ့ အိပ်ဆောင်က အခန်းရောက်တော့ မီးတွေကအကုန်ပိတ်ထားတယ်။ဘာသံမှ မထွက်အောင်ကြိုးစားပြီး အ၀တ်လဲပြု ရတာပေါ့နော် အခန်းဖော် မနိုးအောင်လို့။ သူ့ကြည့်ရတာ အိပ်ပျော်နေပြီထင်တယ်။ သူ့ကြည့်ရတာအမြဲငြိမ်ငြိမ်လေးပဲ။ ညဘက် ကျွန်တော်ပြန်ရောက်ပြီဆို အိပ်ယာထဲမှာ စအိပ်နေပြီ။ အ၀တ်တွေချွတ် ညအိပ်ဘောင်းဘီကိုစွပ်ကာ ကျွန်တော့်ခုတင်ပေါ်အသာတက် တော့ 'ဒီည ပျော်ခဲ့ရဲ့လား ဘော်ဒါ' လို့ အခန်းဖော်ဆီက မေးသံထွက်လာတယ်။
'ဆောရီးဗျာ...ခင်ဗျားကို နိုးသွားအောင်လုပ်မိတယ်။ အသံမထွက်အောင်တော့ကြိုးစားလုပ်တာပဲ'
'ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာ၊ ငါအိပ်မပျော်သေးပါဘူး။ မင်းသွားရှာတဲ့ဟာတွေကရော အဆင်ပြေခဲ့ရဲ့လား' သူကမေးသေး။
'အင်း......ကျွန်တော်ရှာတာထက်ထောင် ပိုရခဲ့သေးသလိုပဲဗျ' သူ့ကိုအဖြေပေးရင်း သူစိမ်းတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို ခပ်ပြင်းပြင်း-ိုး ခဲ့တာရယ်၊ ကျွန်တော့်ခရေ၀က သုတ်ရည်တွေ စီးကျတာရယ်ကို ပြန်မြင်ယောင်နေမိပါတယ်။
'အိုကေ...နက်ဖြန် အတန်းထဲကျမှ တွေ့ကြတာပေါ့ ဘော်ဒါ' တဲ့သူက စိတ်ချလက်ချဖြစ်တဲ့လေသံနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီးပြောပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ဒိန်းကနဲခုန်ကာ သူအိပ်နေတဲ့ခုတင်ဘက်ကို လှည့်ကြည့်မိ....
Alex Aung (21 March 2013)
Posted by Alex Aung at 8:25 PM No comments: